မာမာအေး: December 2008
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Specail Audio CD
Click Here to listen her songs specially dedicated to
2007 Burma Saffron Revolution and
2008 Burmese Nargis Victims Relief.
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 5:13 PM No comments:
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Eventasuccess
မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေပွဲ ပြုလုပ်ပြီးစီး
ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂ဝဝ၈
တေးသံရှင်မာမာအေး နှင့် ဂီတမြတ်နိုးသူများ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် ‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’၏ ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပရိသတ် ၂ဝဝ ကျော် တက်ရောက် အားပေးခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဒေးလီးစီးတီးမြို့ရှိ ကပွဲရုံတစ်ခုတွင် ပြုလုပ်သော အဆိုပါ ဖျော်ဖြေပွဲကို ညနေ ၇ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တေးသံရှင်မာမာအေးနှင့် ဒေသခံအနုပညာရှင်များက ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ‘သီချင်းဆိုရအောင်’ ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါပွဲတွင် တေးသံရှင်မာမာအေးက ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပရိသတ်အား ရှင်းပြပြီး ၎င်း၏ ကျော်ကြားသော တေးသီချင်းများထဲမှ ‘သက်တံပေါ်မှာ ကစားမယ်’၊ ‘ပိတောက်လမ်း’၊ ‘မေ့ကွက်ကိုရှာ’၊ ‘အိုဘယ့်တဏှာ မိမာယာ’ စသည့် တေးသီချင်းများကို ဆိုဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းများကို ပြောပြရင်း သီဆိုပြခဲ့သည့်အပြင် မြို့မငြိမ်း၏ ‘သက်ဝေ’သီချင်းကို မည်သို့ သီဆိုရကြောင်း တစ်ပိုဒ်ချင်း သင်ကြားပြသပြီး ပရိသတ်နှင့်အတူ သီဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တေးသံရှင် မာမာအေး ထံ၌ စန္ဒရား ရက်တိုသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သော မြန်မာကလေးငယ်များကလည်း ‘ထံတျာတေရှင်’ တေးသွားဖြင့် တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
ဖျော်ဖြေပွဲအတွင်း တေးသံရှင် မာမာအေးက ‘ချမ်းမြေ့ပါစေ’ တေးသီချင်း သီဆိုရင်း ပရိသတ်အားလုံးကို တစ်ဦးချင်းလိုက်လံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်များကလည်း အမှတ်တရ ပန်းစည်းပေးခြင်း၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အလှူငွေ ပေးအပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်းကို အသက် ၆၆ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် တေးသံရှင် မာမာအေး၏ အနုပညာမှတ်တမ်း အားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်၊ မြန်မာ့ဂန္ထဝင် တေးဂီတ ကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဂီတအနုပညာရှင်များအား ပံ့ပိုးရန်၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာကလေးများအတွက် မြန်မာစာ မြန်မာစကား သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 3:20 PM No comments:
ဂီတပညာရှင် မာမာအေး ရန်ပုံငွေပွဲတွင် အထူးသီချင်းစီဒီ ဖြန့်ချိမည်
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈
လာမည့် စနေနေ့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စ္စကိုဘေးဧရိယာက မြန်မာဂီတချစ်သူများရဲ့ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ “သီချင်းဆိုရအောင်” ဆိုတဲ့ ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲတရပ် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဂန္ထ၀င် ဂီတပညာကို ထမ်းသိမ်းမြှင့်တင်ဖို့၊ မြန်မာဂန္တ၀င်ပညာရှင်များကို ထောက်ပံ့အားပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဒေါ်မာမာအေး အစဉ်တစိုက် ဆန္ဒရှိခဲ့တဲ့ ဖောင်းဒေးရှင်းလုပ်ငန်း ထူထောင်ဖို့ ပြုလုပ်တဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်မာမာအေး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာ ဘာသာရေးပွဲလမ်းများတွင် အသံလှူခြင်း၊ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများတွင် မြန်မာဂန္ထ၀င်တေးဂီတကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ တေးဂီတ သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင် ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်တခု အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာတော်များရဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကစပြီးတော့ ဒေါ်မာမာအေးက သူ့ အနုပညာနဲ့ တေးသီချင်းများနဲ့ မြန်မာအမျိုးသားရေးကို လှုံဆော် အားပေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ၊ တေးသီချင်းဖြန့်ချိမှုများကို အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ နာဂစ် အရေးအခင်းမှာ မြန်မာတို့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ လှူဒါန်းကြဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ သီချင်းအပါအ၀င် ပုဒ်ရေ ၅ ခု ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ် မွေးနေ့ အခမ်းအနားတခုမှာ ဒေါ်မာမာအေး တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ မူလနိုင်ငံတော်သီချင်း ပြန်လည် သင်ကြားမိတ်ဆက်တဲ့ အသံနှင့်တေးအပြင်၊ တီးလုံးသက်သက်ပါ နောက်တိုး ၂ ပုဒ်နဲ့ စုစုပေါင်း ၇ ပုဒ်ကို စုစည်းပြီး အဲဒီက ရန်ပုံငွေပွဲမှာ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဖြန့်ချိပါမယ်။ မိုးမခ မီဒီယာက မေတ္တာဖြင့် ထုတ်ဝေပြီး အလှူခံရသမျှအားလုံးကို ရန်ပုံငွေပွဲကို လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်မာမာအေး အခြေချနေထိုင်တဲ့ ဖို့ဝိန်းအရပ်မှာ စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများအဖြစ် ဆေးရုံများတွင် ကျန်းမာရေးပညာပေး လုပ်အားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် ဆွမ်းကွမ်း အလှူအတမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် မိမိဂီတအလုပ်အားလပ်ချိန်တို့မှာ လုပ်ကိုင်နေလေ့ရှိတဲ့နည်းတူ ယခု ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာကို ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလမှာလည်း အလယ်တန်းကျောင်းသူ မြန်မာကလေးငယ်များကို မြန်မာဂီတအခြေခံနဲ့ ပီယာနိုအတီး သင်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲသည် ကလေးတွေနဲ့အတူ ပွဲတော်မှာ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု ပြုလုပ်ပြီး ကလေးတွေကို မြန်မာဂီတ၀ါသနာပါလာအောင် အားပေးစည်းရုံးအုံးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်မာမာအေးက ယခု တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ မတိုင်ခင်မှာ ဆန်ဖရန်နဲ့ နယူးယောက်တို့က မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာ သူ့ဂီတနဲ့ အနုပညာ အတွေ့အကြုံတို့ကို ဟောပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခကလည်း ဒေါ်မာမာအေး ဆန်ဖရန်စစ္စကို ခေတ္တရောက်ခိုက် စကားလက်ဆုံပြောခဲ့သမျှကို တင်ဆက်ပါဦးမယ်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 3:19 PM No comments:
Event Updates - Stage Backdrop Design - Correction
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 2:35 PM No comments:
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Event
Posted by MoeMaKha at 6:28 PM No comments:
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Pwe in the news
‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’ ရန်ပုံငွေပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ တွင် ပြုလုပ်မည်
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈
အသက် ၆၆ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် တေးသံရှင် မာမာအေး က ၎င်း၏ ဂီတအမွေအနှစ် မှတ်တမ်းအားလုံးကို တစုတစည်းတည်း စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာ့ ဂန္ထဝင်တေးဂီတ မပျောက်ပျက်အောင် ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် အနုပညာချစ်သူများနှင့်အတူ ‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’ အမည်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတရပ် ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး ယင်းအဖွဲ့ရန်ပုံငွေအတွက် တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
‘သီချင်းဆိုရအောင်’ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ ရန်ပုံငွေပွဲကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော်ဒေသ (ဘေးဧရိယာ) ရှိ ဒေးလီးစီးတီးမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် (စနေနေ့) ညနေ၌ ပြုလုပ်မည်ပြီး တေးသံရှင် မာမာအေးက ဒေသခံ အနုပညာရှင်များ၊ ဂီတပညာရှင်များနှင့် တွဲဖက် တင်ဆက်ဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖျော်ဖြေပွဲအတွင်း တေးသံရှင် မာမာအေးက ပရိသတ်တောင်းဆိုသည့် တေးသီချင်းများကို သီဆိုပေးမည့်အပြင်၊ သီချင်းသီဆိုပုံနည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြသပြီး ပရိသတ်က လိုက်ပါသီဆိုနိုင်အောင်လည်း သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
တေးသံရှင် မာမာအေးသည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အသံတိတ်ခေတ်၊ ဓာတ်ပြားခေတ် မှစ၍ ယနေ့တိုင် ဂီတအနုပညာ လုပ်ငန်းများကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်အခြေစိုက် ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန (မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်) တွင် ‘ပြောပြစရာတွေ တပုံကြီးရှိသေးတယ်’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘဝဖြတ်သန်းမှုနှင့် ဂီတအတွေ့အကြုံများကို အပတ်စဉ် တင်ဆက်လျက်ရှိသည်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:20 PM No comments:
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Specail Audi...
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Eventasucc...
Event Updates - Stage Backdrop Design - Correction...
Mar Mar Aye Foundation - Fund Raising Pwe in the n...